စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူး (၂၀)နေရာနှင့် စာပို့(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး(၂)နေရာတို့အတွက်ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း | Ministry of Planning and Finance
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူး (၂၀)နေရာနှင့် စာပို့(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး(၂)နေရာတို့အတွက်ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Posted By : paprd_editor, Date : 11.10.2021 comment
၁။ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူး (၂၀)နေရာနှင့် စာပို့(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး(၂)နေရာတို့အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
B.Com/M.Com,B.Act/M.Act,B.Econ/ M.Econ, B.Econ(Stats)/M.Econ(Stats), B.BSc(Applied Statistics)/ Master of Applied Statistics
B.C.Sc/M.C.Sc, B.C(Tech)/M.C (Tech)
(ခ) အမှတ်စဉ်(က)အတွက် ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၀)နှစ်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် (၃၅)နှစ်အထက်မကျော်လွန်သူ၊ အမှတ်စဉ်(ခ) အတွက် ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တွင် အသက်(၂၅)နှစ်အထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရ မည်။
၃။ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်သာ လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်လွှာပုံစံကို ဤနေရာကို Click ၍ Download ရယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာတွင်ပါရှိသော အချက်များကို ပြည့်စုံစွာရေးသွင်းရမည်။ (လျှောက်လွှာရောင်းချ ခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းမပြုပါ။)
၄။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိရမည်-
(က) တစ်လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော လိုင်စင်(ကာလာ)ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ၊ (ကျောဘက်တွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ရေးသားရန်)၊
(ခ) အမှတ်စဉ်(က)အတွက် ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ/ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင် လက်မှတ် မိတ္တူ၊ အမှတ်စဉ်(ခ)အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် မိတ္တူ၊ (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူချိန် တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်)၊
(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ)၊(မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်)၊
(ဃ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရှိသော အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် ကတ်ပြား မိတ္တူ(ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်)၊
(င) ဝန်ထမ်းများအတွက် မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာန၏ထောက်ခံချက်၊
(စ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဆရာဝန်၏ ဆေးထောက်ခံစာမူရင်း၊
(ဆ) လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၁)လအတွင်း အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ ထောက်ခံစာ မူရင်းနှင့် ပြစ်မှု ကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ ထောက်ခံစာမူရင်း၊
၅။ ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် လျှောက်လွှာများကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်းနောက်ဆုံး ထား၍ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။
၆။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် လျှောက်လွှာ(၂)စုံကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာန ထောက်ခံ ချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဝန်ကြီးဌာန၊စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသို့ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန် ဖြစ်သည်။
၇။ သတ်မှတ်ရက်ထက်နောက်ကျပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများ၊ ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ် ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက် မပြည့်စုံသူ များကို စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
၈။ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၀) နေရာအတွက် လျှောက်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စိစစ် ပြီးပါက သတ်မှတ်ချက်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများသည် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေ စာမေးပွဲကို ၂၇-၁၁-၂၀၂၁ရက်နေ့(စနေနေ့)တွင် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြား များကို ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နှင့် ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တို့တွင် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၂)၊နေပြည်တော်တွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက် ထုတ်ယူ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၀) နေရာ အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများကို ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နှင့် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တို့တွင် လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာ လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၉။ ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါက စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိပါကြောင်းနှင့် အနည်းဆုံး(၃)နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိဝန်ခံချက် လက်မှတ် ရေးထိုး ရမည်။
၁၀။ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၀)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က) မြန်မာစာ (၂)နာရီမေးခွန်း
(ခ) အင်္ဂလိပ်စာ (၂)နာရီမေးခွန်း
(ဂ) အထွေထွေဗဟုသုတ (၂)နာရီမေးခွန်း
၁၁။ စာပို့ ရာထူး (၂) နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်စဉ် (က) နှင့် (ခ) တို့အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသည့်ရက်များ ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ဤဝန်ကြီးဌာန Website https://www.mopf. gov.mm တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများထံ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်း ကြားခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးသူများ၏ အမည်စာရင်းကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန Website https://www.mopf. gov.mm တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပါမည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၇ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
နေကြာသီးနှံ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းတိုးတက်မှုနှင့် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း (နေပြည်တော်၊ မေလ၊ ၂၆ ရက်)
စာပို့ရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်
စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း
စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၀)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းရမည့်ရက် ပြင်ဆင်ချက်ကြော်ငြာခြင်း
အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၂)နေရာ၊ စာပို့ရာထူး(၂)နေရာ၊ လုပ်သား(ဉယျာဉ်)ရာထူး(၁)နေရာ နှင့် လုပ်သား(အထွေထွေ)ရာထူး(၁)နေရာ စသည့် အမှုထမ်းရာထူး(၆)နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း
အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး (၂)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း